Samekaab-(GLN): Hooyo Ardo oo ku nool deegaanka Samekaab, oo ka tirsan gobolka Sool, ayaa xilli lagu qiyaasay soddon sano waxa hayey xanuunka dhimmirka, iyada oo silsilad lugta lagaga xidho. Hooyo Ardo, ayaa u baahan gurmad ca...
Ceerigaabo-(GLN): Hooyada qoysku way indho la’dahay, aabbaha na waxa ku dhacay xanuunka faalliga, oo lug iyo gacan ayuu ka haleelay. Qoysku, waxa uu ka kooban yahay toban carruur ah. Hooyada qoyska indho la’aanta waxa u raaca...
Warbixin Laga Sameeyey Caqabadaha Af Soomaaliga Ku Gedaaman
Washingoton-(GLN): Idaacadda VOA, ayaa warbixin ka samaysay dhibaatooyinka muddooyinkii ugu danbeeyey la soo dersay haysta afka Soomaaliga. Halkan hoose guji si aad u dhegaysato warbixita: https://www.voasomali.com/a/5220...
Sheekh Mustafe ayaa markii ugu horreysay ka warramay taariikhdiisa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun wuxuu ka mid yahay ka qeyb galeyaasha Kulanka Culumada Soomaaliya, oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Ken...
Halkan ka daawada muxaadaro uu soo soo jeediyo Dr./Sheekh Cali Maxamed Saalax, oo ka hadlay arrimo uu bulshada ku baraarujinayo in ay badbaado ku jirto iyo arrimo lagu halaagsamayo, haddii aan laga gaashaaman. https://www.you...
Urur lagu magacaabo "Haldoor" ayaa dugsi sare oo farsamada gacanta lagu baran doono waxay ka dhisayaan magaalada Hargeysa. Dugsigan ayaa loogu talagalay in ay wax ka bartaan dadka danyarta ah. https://www.youtube.com/watch?ti...
Hargeysa-(GLN): Waxay is u qaadeen jacayl xad-dhaaf ah. Mar na ba meesha soo may dhigan calaf ayaa idin ka la kaxayn doona, oo waa la idin soo dhex geli doonaa. Bal se sannaddo ka dib, markii uu jacaylkoodii dhiman waayey, waxa u...
Minnesota-(GLN): Macallin Mustafe Xaaji Cali, oo ku nool dalka Maraykanka, ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyey wiil uu dhalay oo u dhintay isticmaalka xad-dhaafka ah ee daroogada, isagoo wareysi dheer uu la yeeshay weriye Cal...
Hablo Halabuur Ganacsi Ka Hirgeliyey Muqdisho
Muqdisho-(GLN): Laba hablood oo walaalo ah, ayaa halabuur ganacsi oo ay noloshooda ku maareeyaan ka hirgeliyey magaalada Muqdisho. Waxay u muuqdaan kuwo la dhacsan hawsha ay sameeyeen, iyagoo u adkaystay caqabad kasta oo ka hor t...
Oday Reer Burco Ah Oo Beertiisa Qota Isaga Oo Kaadihaystiisa Dhinaca Ku Sita
Burco-(GLN): Xuseen Aadan Xasan, waxa uu ku nool magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer. Waxa uu in muddo ah la tacaalayey dhib ay gaadhsiiyeen rasaas jidhkiisa ku dhacay, oo waxyeello na u geystay. Isaga oo kaadihaystiisa d...